အာရုံရလို့ရေးလိုက်တဲ့ကဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » အာရုံရလို့ရေးလိုက်တဲ့ကဗျာ
Posted by Sonny on Sep 17, 2011 in Poetry |7comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော်ကဗျာစပ်ကြည့်ပါရစေ။ အာရုံရတာနဲ့။ သည်းခံပါ။ ကျွန်တော်ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါ။ ၁၇-၉-၂၀၁၁
ငါ့ဘာသာ ငါ စီးဆင်း
ငါ့ ကျေးဇူးတွေ မကန်းနဲ့
ငါ ကာကွယ် ဖို့
ငါ့ကို ပြန်သတ် ကြတော့မှားလား
ကယ်ပါအုံး ဧရာဝတီ သခင်
အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီမှ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံတွင် တည်ဆောက်လျှက် ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တော့မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှအမည်မဖော်လိုသည့် တာဝန်ရှိသူ အကြီးကဲ တစ်ဦးက စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့ ပြောသည်။ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အကုန်လုံး ဒီလောက်ကန့်ကွက်နေတာ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီး မလုပ်ရဲတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစီမံကိန်းကို သိပ်ပြီး ဘ၀င်မကျဘူး။ အထက်လူကြီးတွေ ခိုင်းလို့ လုပ်နေရတာ။ ဒီစီမံကိန်းကိုလည်း ဖျက်သိမ်းဖို့ လူကြီးတစ်ချို့က ကြိုးစားနေကြပါတယ်..ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်စေ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းသည် ရပ်တန့်သင့်သော စီမံကိန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းကို သမ္မတမှ အနားပေးဖွယ်ရှိနေကြောင်း သတင်းတစ်ခု ကြားရသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံတွင် ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း၏ မဆင်မခြင် ပြောဆိုမှုများနှင့် အများပြည်သူများကို ငဲ့ညှာမှု မရှိ၊ နိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းမြစ်တစ်ခုကို ငွေနှင့်လဲစားမယ့် သဘောများ သက်ရောက်သည့် အပြောများကြောင့် သမ္မတမှ ပြည်သူများအပေါ်စိတ်မကောင်းများ ဖြစ်လျှက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကိစ္စကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်အတွက် လာမည့် စနေနေ့ ၁၇ရက်တွင် ဧရာဝတီစီမံကိန်း ကိစ္စကို နေပြည်တော်တွင် ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်| ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့ မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ဆက်ပြီး အကောင်ထည်ဖော်သင့် မဖော်သင့်ဆိုတာ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူသွားမယ်လို့
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ အကြီးဆုံး မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအပါအ၀င် တခြား ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတခု ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပအပြီးမှာ ၀န်ကြီးက အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
တခြားဝန်ကြီးတွေကရော ဘာပြောလဲခင်ဗျ။ –
၀န်ခံတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျ။ အခု သူတို့ စီမံကိန်းကို မှားတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံပေမဲ့ စီမံကိန်းကိုတော့ ဆက်ပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်မယ့်သဘောလား။ ဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျ။ –
“ဒီနေ့ကတော့ အဲဒီသဘောမျိုး မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း ဒါက အခု လွှတ်တော်လည်း ပေါ်ပေါက်လာပြီ။ ပြည်သူအများက ကျနော်တို့ကို ယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိတယ်။ လွှတ်တော်လည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် လွှတ်တော်မှာ ကျနော်တို့ တင်ပြသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြတာပေါ့လေ။ အဲဒါကို လွှတ်တော်မှာ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ တင်ဖို့အစီအစဉ် ရှိတယ်ခင်ဗျ။ လွှတ်တော်တင်ရင်လည်း သူတို့ဘက်က လူတွေကို ဖိအားပေးပြီးတော့မှာ ရမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သမာသမတ်နဲ့လုပ်မလား။ ဒါကတော့ မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့လေ။ တကယ်လို့ လွှတ်တော်မှာ သမာသမတ်ကျကျနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအလျောက် တင်သွင်းခွင့်ရှိလို့ရှိရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဲပေးရင်တော့ ဒီကိစ္စဟာ အားလုံးရဲ့ အမြင်အရတော့ ဒါ အောင်မြင်မယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒီ မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမယ့်အပြင် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား လူထုတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းတွေပါ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံထဲက အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ ပြည်သူတွေက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသံတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလို အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပရတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဧရာဝတီနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လတ်တလော ထူးခြား သတင်တွေပါပဲ
ကိုယ်ထင်ရာ လုပ်ခဲ့သမျှ အများသဘောမတူတဲ့အခါ….၀ိုင်းကန့် ကွက်လာကြတဲ့အခါ..ပြင်ဆင်ချင်ပါတယ်ဆိုလျင်တောင်..
ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပဲ..ဟုသာပေါ့ဗျာ..
ကိုပေါက်ဖေါ် သတင်းကတော့ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးကောင်းတော့ပြည်သာပါတယ်။ မည့်သူ့ကိုမှဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါ။ သမတကြီးဦးသိန်းစိန်အား ၀င်ရောက်ပါရင် အဆင်ချောသွားနိုင်ပါတယ်။ ခင်မင်လျှက်
ဟုတ်တယ်နော် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဝင်မပါဘဲငြိမ်နေတယ်နော်။သူ တခုလောက်ဝင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်လေးတစ်ခုရမှာပေါ့။ဒီစီမံကိန်းကို
ရပ်တန့် ပေးပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ် ဧရာဝတီရယ်။
သမ္မတကြီး ဝင်ပြီးမပါတာ တခြားဟုတ်မယ်မထင်ပါ။ ဝင်ပါချင်ပေမယ့် ဘယ်ဟာက man ဘယ် ဟာက woman လို့မသိလို့နေမှာပါ။
ရာဇဝင်မှာ အသင်ဟာ ဘုရင်
သမိုင်းမှာ အသင်ဟာ သခင်
အတိတ်မှာ အသင်ဟာ အရှင်
ပစ္စုပ္ပန်မှာ အသင်ဟာ ဖခင်
အနာဂတ်မှာ အသင်ဟာ တို့မျိုးဆက်တို့ရဲ့ ထာဝရ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်။
တော်သေးတာပေါ့ လူမင်းရဲ့သမီးကိုများ ခေါ်နေသလားလို့ …. တို့ချစ်တဲ့ ဧရာဝတီ….. ဧရာဝတီကို မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလား ….
(Time & tide wait for no men) လို့ ကျွန်တော် ကြားဖူးပါတယ်……..ဒါပေမယ့်……အခုတော့ ဒီရေတွေ ဘာဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ…..
ရေမှာ သေနတ်မရှိတာ၊ ဖိနပ်မရှိတာ လက်ခံပါတယ်၊
ဒါပေမဲ့ Hydro-power ရှိတာတော့ မငြင်းနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။